Airbus maliteghachiri ọrụ na usoro mgbakọ ikpeazụ A320 nke dị na Toulouse
Home » News na ụgbọ elu » Airbus maliteghachiri ọrụ na usoro mgbakọ ikpeazụ A320 nke dị na Toulouse
Kalịnda Omume njem nlegharị anya nke ụwa
Nwere ike 12, 2021
Facilitylọ ọrụ Airbus ọhụrụ ga-enye ike ụlọ ọrụ A321 iji kwado mgbake ahịa na mkpa.
Ebubere atụmatụ nke mbụ iji webata ikike nrụpụta A321 na Toulouse ka ejidere na mbido nsogbu COVID-19
Usoro ọhụụ ikpeazụ ga - anọchi otu Toulouse A320 FAL nke mbụ
Hamburg na Mobile (Alabama) bụ ugbu a naanị saịtị mmepụta Airbus ahaziri iji kpokọta A321s
Airbus amaliteghachiri ọrụ na mmezi ọgbara ọhụrụ nke ike ụlọ ọrụ A320 Family na Toulouse. Nke a ga-eweta Airbus na-enwewanye mgbanwe na usoro mmepụta ihe mmepụta ihe zuru ụwa ọnụ ya iji meghachi omume na mgbake ahịa na ọchịchọ n'ọdịnihu.
Usoro mgbakọ ikpeazụ A320 / A321 nke emere ka ọ nwee ọgbara ọhụrụ (FAL) ga-anọchi otu mbụ Toulouse A320 FAL. A ga-arụnyere ya na ụlọ ọrụ A380 Lagardère nke mbụ ma ọ ga-arụ ọrụ na njedebe 2022. Ebumnuche mbido ịmebata ikike mmepụta nke A321 na Toulouse ka ejidere na mbido nsogbu COVID-19, na-eso mkpebi iji belata mmepụta ụgbọelu azụmahịa site na gburugburu 40%. Ugbu a, na iweghachite ahịa na anya na nweghachi ike ịlaghachi na ọnụego mmepụta pre-COVID maka ụgbọ elu otu ụzọ dị n'etiti 2023 na 2025, Airbus na-amaliteghachi ọrụ ya maka ọrụ ahụ.
Hamburg na Mobile (Alabama) bụ ugbu a naanị saịtị mmepụta Airbus ahaziri iji kpokọta A321s. Ezigbo A320 Family FAL na Toulouse ga-enyere aka melite ọnọdụ ọrụ, usoro ọrụ mmepụta ihe niile yana ogo na asọmpi site na ịgbakwunye usoro mgbakọ ọhụụ na usoro mmepụta nke Airbus single-aisle. Nke a dị elu nke mgbanwe mgbanwe A321 ga-akwado ntinye ntinye nke A321XLR site na Hamburg malite na 2023.
Ezinụlọ A320 bụ ụgbọ elu azụmahịa na-erekarị ahịa, na-ere ihe karịrị ụgbọ elu 15,500 karịa ndị ahịa 320, yana ihe karịrị 5,650 na azụ azụ.